Elona xabiso liphezulu lokurhweba ngokuSebenza ngePhepha ngoMeyi 2022 | Khuphela ngoku-Funda ngoRhwebo olu-2
Khuphela i-PDF yethu yeNtengiso yokuSebenza ngexabiso le-2022!
Elona xabiso lokurhweba ngexabiso lePDF ngo-2022, bonke abathengisi abanamava basebenzisa imeko yezobuchwephesha bezobugcisa kunye nezixhobo zokufunda zetshathi (ngakumbi kwezo kamva). Nangona kunjalo, ngelixa abanye benokuthi bagxile kwiinzuzo ezincinci kwixesha elifutshane, abanye bathanda ukucinga ngokuqhubela phambili.
Ngamanye amaxesha kunokuba nzima ukubona iinkuni zemithi, ke kunokuba kulunge kuwe ukuba uthathe inyathelo ubuye umva kwaye uphinde uvavanye iintsingiselo. Ukubeka ngokulula, oku ngamaxabiso ezorhwebo.
Kule xabiso lokurhweba nge-PDF, siya kuchaza yonke into ekhoyo malunga nesicwangciso sokurhweba. Nokuba ujonge ukurhweba nge-forex, izitokhwe, ii-cryptocurrencies, okanye igolide – sinethemba lokuba esi sikhokelo siya kukunceda ukuba ufumane ukuqonda okunzulu ngakumbi kwexabiso lentengo. Ngaloo ndlela, uya kuxhotyiswa ngalo lonke ulwazi oludingayo ukuze uqalise ukurhweba njengepro!
Yintoni ukurhweba ngexabiso lentengo?
Intengiso yesenzo sexabiso kukuhlalutya ukuqhawuka, ukutshintsha kwezorhwebo kunye neendlela zexabiso, ngaphezulu kwexesha elithile. Le yeyona ndlela inemveliso yokufumana ulwazi olusebenzayo malunga nokuhamba kwexabiso leeasethi.
Endaweni yokuba ube nakho ukuvavanya ixabiso lomntu ngamnye, isicwangciso sikhangela umbono odityanisiweyo wokuhamba kwamaxabiso- njengoko kwaye kusenzeka. Njengomzekelo, unokujonga kwakhona kwiitshathi zamakhandlela zaseJapan ukuze ufumane isishwankathelo sentaka malunga noku.
Ukuthengiswa kweNtengo yokuSebenza kuhlala kulungile
Njengomrhwebi, xa uqala ukubona ilahleko, into yokuqala ekufuneka uyenzile kukulawula umngcipheko wakho. Oku kuthetha ukuvala urhwebo njengoko kwaye xa ubona kufanelekile- nokuba ubomvu okanye uluhlaza.
Zama ukuba ungenzi izigqibo ezininzi okanye izigqibo ezingenangqondo. Ngokusesikweni, iibhiliyoni zeedola zithengwa kwaye zithengiswa mihla le ngeemarike, zizinto ezingacacisiyo.
Nokuba yeyiphi imbono yentengiso kwimali yakho yokubhangqa, amanyathelo entengo aya kuthathela ingqalelo ukuhamba kwemali ngokuqhubekayo. Umzekelo wale nto inokuba yinkampani enkulu yombane yaseMelika ethenga iilaptops ezivela eJapan (JPY), okanye ingxowa mali eqhelekileyo ukuzama ukubuyisa iipotifoliyo zayo ekupheleni kwenyanga.
Inyathelo elibalulekileyo lokuba ngumrhwebi omkhulu kukuziqhelanisa nolawulo lomngcipheko. Ukuqhubela phambili ezantsi ngamaxabiso entengiso ye-PDF, siza kuchaza oku ngeenkcukacha ezingakumbi.
Yintoni iRisk Sentiment?
Ukubeka ngokulula, uvakalelo lomngcipheko lubonisa imvakalelo kunye nokuma kweentengiso zemali ezithatha inxaxheba. Indlela elungileyo yokubonisa ukuba bangakanani abathengisi abazimisele ukuphulukana nabo, okanye balindele ukuba benze malini, kukufunda into abagqibe ukuyithenga okanye ukuyithengisa. Uvakalelo lomngcipheko sisiseko senqanaba lomngcipheko abathengisi nabatyalomali bathambekele ekuthatheni. Olu vavanyo lomngcipheko ngokusisiseko lutyekelo oluqhelekileyo lwentengiso yonke yezemali.
Ukuzazisa ngobume bemarike yezemali ebanzi emngciphekweni kuya kukubonelela ngakumbi ngengqondo yomngcipheko onokuthi ulungele ukuwuthatha xa kufikwa kwimali nakwiimpahla zakho (ngexesha elithile).
Ngalo lonke ixesha khumbula ukuba xa kusiziwa kwindawo evulekileyo (kwintengiso), kukho ithuba lokwenyani lokuba urhwebo lwakho lunokuphela lubomvu. Kuyakholelwa ngokubanzi ukuba zimbini iimvakalelo zokuma ezihlala zikhokelela kwinkqubo yokwenza izigqibo yomrhwebi. Uyithelekelele - Ukoyika kwaye ukunyoluka. Ngenxa yoko, iimarike zezemali zinakho kwaye ziya kuyisebenzisa ngokupheleleyo loo nto.
Isabelo sengonyama kwimarike yezemali sithathwa njengexesha elifutshane engqondweni. Oku, ewe, kuthetha ukuba ungangena ngokukhawuleza kwezorhwebo, kwaye uphume xa ixesha lilungile. Kwakhona esi sesinye sezizathu zokuba kufuneka ube nokuqonda okuhle ukuba kuthetha ntoni umngcipheko. Ekugqibeleni, oku kubonisa isimilo sabarhwebi kunye nabatyali mali kwaye ikuxelele ukuba ingaba banokufuna ukhuseleko okanye bafuna umngcipheko.
Umngcipheko on - Yintoni le?
Ibinzana elithi 'ukubeka umngcipheko' liya kusetyenziselwa ukuchaza intengiso ethile efuna umngcipheko. Ukuba kukho 'ukubeka umngcipheko' okusingqongileyo; Abarhwebi kunye nabatyali mali baya kuba nethemba lokukhangela imbuyekezo ephezulu. Ngamanye amaxesha, oku kungakhokelela ekuthengeni 'iiasethi eziyingozi', okanye ekuthengiseni 'iiasethi ezikhuselekileyo' - Oku kuyitshintsha imali ibe 'ziimpahla ezinobungozi'.
Apha ngezantsi uyakufumana isibonelelo sezona asethi ziwela ngaphakathi kukopisho 'lomngcipheko' (ngenqanaba lokungazinzi kwexabiso):
Iimali ezinemali eninzi, ezinje ngerandi yoMzantsi Afrika okanye idola yaseNew Zealand
Umngcipheko omncinci owuthathayo, kokukhona ukubuya kwakho kuya kuthabatha - kodwa kunjalo, umngcipheko ophakamileyo, kokukhona ukubuya kwakho kuya kuba phezulu. Zonke iintshukumo zinempendulo.
Xa imarike 'ifuna ukhuseleko' abeendaba bezemali baya kulisebenzisa eli binzana 'umngcipheko'. Kwimeko yendawo emngciphekweni, akunakulindeleka ukuba abathengisi benze uthengiso olunobungozi. Omnye umzekelo 'womngcipheko' kuxa imarike ibonisa ukungazinzi okuphezulu, kunye noqikelelo lwezoqoqosho olubonakala ngathi luyancipha. Iziganeko ezikhulu zehlabathi zinokuba nefuthe elibi kwimarike, kwaye ngenxa yoko-oku kuyakwenza ukuba intengiso ibekho 'emngciphekweni'.
Ezinye zeempembelelo ezinkulu kwintengiso yi-COVID-19, ingxaki enkulu yezempilo egubungele umhlaba, ungquzulwano eMbindi Mpuma kunye nengxaki enkulu yezemali ka-2008. Njalo abathengisi banokuthi babe 'semngciphekweni', oko kuthetha ukuba bayathandabuza ukuthatha umngcipheko. Kule meko kuhlala kukho iindlela ezimbini ezahlukileyo abakwaziyo ukuzenza, zezi:
Abarhwebi banokuthenga (faka indawo) ii-asethi 'ezikhuselekileyo
Abarhwebi banokuthengisa (indawo yokuphuma) 'iiasethi eziyingozi'
Abatyalomali banokukhangela 'indawo ekhuselekileyo' xa kuziwa kwimarike ebukhali ngakumbi. Oku kungenxa yokuba baya kukhuseleka ngakumbi kwimeko yezoqoqosho. Imali enzima ebandayo kucingelwa ukuba yenye yezona ndawo zikhuselekileyo. Ngexesha loloyiko lwezezimali kunye nokungaqiniseki, abatyali mali kunye nabarhwebi bahlala bejika nayiphi na imali kwi 'asethi ekhuselekileyo'. Kungenxa yokuba iiasethi 'ezinobungozi obuphantsi' zibonelela ngemivuzo esezantsi, kodwa oku kulungiswa ngomngcipheko omncinci.
Uluvo olungemva koku kukudala 'ukuthintela umngcipheko', ukukhusela imali. Ukuba, njengabaninzi, awunamdla kwimali yendawo yakho 'njengendawo yakho ekhuselekileyo' nazi ezinye iindlela onokucinga ngazo:
Esona sizathu siphambili kwezi zixhobo zemali zingentla zithathwa njenge 'ndawo ezikhuselekileyo' kungokuba nokuba imeko yezoqoqosho ikweyiphi imeko, izixhobo ezikhankanyiweyo ziya kuhlala zibonelela ngexabiso elifunekayo eliya kuhlala lifunwa ngabantu.
Abanye ngaphakathi kwezithuba zemali banokuthi izitokhwe kwicandelo lezempilo, kunye necandelo labathengi, zizinto zokuzikhusela- kungenjalo zibizwa ngokuba 'ziindawo ezikhuselekileyo' zabathengisi bempahla.
Kutheni le nto iSentiment yomngcipheko ibaluleke kangaka?
Ukuqonda kakuhle ukuba isebenza njani imeko yomngcipheko kuya kukunceda ugcine ikomkhulu lakho ngokulawula nawuphi na umngcipheko kunye neemvakalelo ezichaphazelekayo. Ke ngale nto engqondweni, eli candelo lentengo yokurhweba ngePDF iya kuba ngumngcipheko wokujolisa. Ukukunika umbono olungileyo wokuba kutheni imarike inokuthi iziphathe ngale ndlela uyiyo, kufuneka ufunde imeko yomngcipheko. Iimakethi ziya kunyuka zisihla, ziguquka mihla le, kwaye konke oku kuya kubonakala kwimeko yomngcipheko.
Ukuze ukwazi ukuqonda idatha yezoqoqosho kunye neendaba zakutshanje zezezimali, ukuqonda kwakho umngcipheko kufuneka kukuncede ukuba uphephe ukoyikiswa kwemali xa ujongile. Ngamanye amaxesha utshintsho lomngcipheko lutshintsha ngesantya esicothayo, ngamanye amaxesha ngokukhawuleza. Amaxesha ngamaxesha imakethi inokuba 'semngciphekweni' kwiintsuku ezininzi okanye kwiinyanga, kwaye emva koko lutshintsho ngequbuliso 'kwimodi yokubeka emngciphekweni'.
Kodwa ngokusebenzisa imeko yomngcipheko, ngelixa ubeka iliso kwiindaba zentengiso, umi ethubeni elingcono lokuqonda ukungaqondakali kunye nokuntsonkotha ngamanye amaxesha okuxelwa kwimithombo yeendaba zemali. Xa kukho ukukhutshwa kwedatha yezoqoqosho edanisayo ngokubhekisele ekuphuculeni imeko yezoqoqosho, kungangabikho nto ingako kutshintsho kwimeko yomngcipheko.
Xa kukhutshwa idatha yemo engqongileyo yezoqoqosho kwaye ixhomekeke kwindawo yentengiso eyehlayo, icandelo okanye uqoqosho, oku kunokuba nefuthe elikhulu kwimvakalelo yomngcipheko kwaye kuthathwa njengesiphumo esidimazayo. Ukuhanjiswa kweendaba kwenza umahluko omkhulu kutshintsho lweemvakalelo zomngcipheko, kwaye kwimeko enjalo, imarike inokungahoyi idatha epapashiweyo kwaye iqhubeke nokuthenga iiasethi eziyingozi nokuba zithini!
Xa imakethi itshintsha indlela 'yomngcipheko', kulapho umrhwebi onamava anokuthengisa ngayo nayiphi na impahla enobungozi, kodwa abambelele ngokuqinileyo kwii-asethi 'ezikhuselekileyo. Oku kungakhokelela kwintengiso yamanyathelo akho entengiso ukuba anqandwe, anokuthintela nakuphi na ukujongwa okubalulekileyo. Ewe kunjalo, kukwakho nethuba lokuba amaxabiso aya kuqala ukuhla kwizinga elikhawulezayo.
Unoko engqondweni, icandelo elilandelayo lexabiso lethu lokurhweba nge-PDF lijonga indlela yokulinganisa umngcipheko kwimo.
Ungayilinganisa njani iRisk Sentiment?
Nokuba ukwiimeko 'zomngcipheko' okanye 'umngcipheko', xa urhweba ngaphakathi 'kwintengiso ephilayo' kufuneka ubeke iliso kwezinye zeemetri eziphambili (jonga ngezantsi). Baya kuba luncedo kakhulu xa kufikwa ekuqondeni imeko yomngcipheko kunye nefuthe elinokuba nalo.
Ii-Indices eziSekwe e-US
Kuwo onke amanqaku exesha lokwenyani ukugcina iliso elinonophele, ii-indices zentengiso e-US yenye yezona zinto zisekuhleni ezikhoyo.
Ezinye zezona ndawo ziphononongwe kakhulu kwi-indices zase-US zezi zilandelayo:
I-S & P 500 (iMigangatho kunye neNtlupheko, isalathiso semarike yemasheya)
Umndilili weDow Jones woShishino (i-DJIA)
Izalathiso ezidweliswe apha ngasentla aziphelelanga kwimakethi yase-US, zezoqoqosho lwehlabathi liphela. Ukuba unqwenela ukufundisisa iingxelo ngokubhekisele kolwalathiso lwala ma-indices-ungazithengisa kumajelo eendaba ezemali ngamaxesha ahlukeneyo ngemini, umzekelo, CNBC, MarketWatch, Reuters kunye neBloomberg.
Yintoni oNondyebo baseMelika?
Ukuze banyuse imali ukuze bakwazi ukuxhasa ngemali iiprojekthi ezahlukeneyo okanye imisebenzi yemihla ngemihla, uNondyebo wase-US uya kukhupha iibhondi. Iibhondi zikaRhulumente wase-US ngamanye amaxesha zibizwa ngokuba zii-T-Bills, zikhulula iibhondi zayo unyaka wonke.
Ngotyalomali engqondweni, oonondyebo baseMelika bathathelwa ingqalelo njengendawo 'ekhuselekileyo', kuba basondele kakhulu ekungabikho mngcipheko njengokuba umntu enokufumana. Apha ngezantsi sidwelise iindidi ezintathu ezahlukeneyo zokhuseleko lwemali esisigxina ezisetyenziselwa ukuxhasa ngemali le misebenzi:
Amanqaku kaNondyebo: - aka T-inqaku. Ukulinganiswa kwinqanaba lokukhuseleka kwetyala: I-1-10 iminyaka.
Iibhondi zikaNondyebo: - aka T-iibhondi. Amanqanaba ahlawulweyo okukhula kwamatyala: 10-30 iminyaka).
Amatyala kaNondyebo: -Iibhilikhwe zika-T. Ireyithi emiselweyo yokukhula kwetyala: 1 unyaka nangaphantsi.
Umsebenzi ngamnye wengxowa-mali uhlawula inzala yawo ngendlela eyahlukileyo, kwaye njengoko ubona kuluhlu lwethu olungentla, nganye inezinga lokukhula elahlukileyo. Oku kwahluka kwiinyanga ezimbalwa ukuya kumashumi amathathu eminyaka. Ngalo lonke ixesha jonga iingxelo zosasazo lwezezimali ngezivuno ezahlukeneyo.
Ukuba izivuno ziphezulu, kunokwenzeka ukuba intengiso ithengisa ityala likarhulumente, isivuno sabo siphucula ngakumbi ukuwa kweemarike. Unokuqiniseka ukuba ukuthengisa le asethi ingenabungozi kubonisa kakhulu ukuba baziva benentembelo malunga nemeko yezoqoqosho ebanzi, oko kuthetha ukuba utshintsho lomngcipheko luye 'kumngcipheko', ukusuka 'kumngcipheko' njengoko isivuno sabo siphucukile.
Kwimeko yezivuno ezinciphileyo, umngcipheko uza kutshintshela 'kumngcipheko', uphawu loloyiko ngenxa yokuthenga ityala likarhulumente njengenye indlela. Ngenxa yoku, isivuno siza kuncitshiswa ngenxa yokunyuka kwamaxabiso.
Isalathiso seVolatility Index
Kweli candelo lentengo yokurhweba nge-PDF siza kuba nokubaleka ngokukhawuleza kwisalathiso sokungazinzi. Ngokuqhelekileyo kuthiwa yi-VIX, esi salathisi sijonga ukubakho kweemarike ezithile ezitshintsha ngesiquphe okanye ngokungalindelekanga kumaxabiso, kunye nokungaqiniseki kwentengiso.
Ngokuqonda kakuhle ubungakanani bomngcipheko, 'kwi' okanye 'ukucinywa', ungasebenzisa i-VIX ukubeka ingozi ekuqikeleleni ukuba baninzi kangakanani abathengi abanesitokhwe abazivayo. Abanye abantu babhekisa kwi-VIX njenge 'gauge yoyika' okanye 'isalathiso soloyiko' ngesi sizathu, kwaye ihlala yenye yezona ndawo zisetyenziswa kakhulu kwizalathiso zokungazinzi ebhodini.
I-S & P 500, umzekelo, inokusetyenziselwa ukulinganisa ukubakho kweemarike zokungazinzi okuqhubela phambili. Njengokuba:
Ukuba i-VIX inika ixabiso elingaphezulu kwama-30, oku kuya kubonakala njengokuguquguqukayo
Ukuba le ingama-20 okanye ngaphantsi, ibonwa njengokuzola.
Ukuphakama kwe-VIX, kokukhona intengiso iya koyika, ewe, oku kuthetha ukuba i-VIX isezantsi, intengiso iya kuzola.
Asinakudibanisa ixabiso lentengiso ye-PDF kunye nokungahoyi ukukhankanya iimali! Emva kwayo yonke loo nto, sesinye sezixhobo zemali ezihamba ngokukhawuleza kunye nolwelo kwihlabathi liphela.
Zeziphi iiMali zoLuhlu eziKhuselekileyo?
Njengoko besikhankanyile ngokufutshane ngaphambili, iindawo ezikhuselekileyo zezezimali zibuthathaka kakhulu kulo naluphi na utshintsho lomngcipheko, ngenxa yoko basabela ngokukhawuleza. Oku kuthetha ukuba balindele ukuba imali igcine ixabiso layo lokuqala, okanye inyuse ixabiso kwindawo yomngcipheko.
The kwimarike Forex ivulekile iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezisi-7 ngeveki, ngokuchasene ne-US urhwebo lwesitokhwe Imarike, nge-forex uhlala ugcina umkhondo wengozi nanini na xa ufuna ukukhangela.
Jonga apha ngezantsi ezinye zeemali ezisetyenziselwa 'indawo ekhuselekileyo'.
I-USD (i-US Dollar)
Xa ujonga indlela eyomelele ngayo i-USD, oku kukumelwa ngokukuko kweemeko 'zomngcipheko'. Imakethi inokuphoxeka kakhulu ukuba imithombo yeendaba yezemali kunye nedatha yezoqoqosho bekufanele ukuba inike ingxelo yokuba i-USD ibinamandla ngakumbi kunezinye iimali eziphezulu ezinesivuno.
Kwiimeko ezininzi oku kuya kuhlala kukhokelela kwiimarike ezijonge kwidola yaseMelika njenge 'ndawo ekhuselekileyo'. Into enomdla kukuba, xa ingqokelela yabatyali mali ikwenza ngaxeshanye, oku kukhokelela kwixabiso lokunyuka kwe-USD. Ukuba ucinga ngokuthenga ubuncwane base-US (njenge 'ndawo ekhuselekileyo'), nceda uqaphele ukuba ukuba awukenzi oko, kuya kufuneka uthenge i-USD ukuze uthenge.
CHF (iSwitzerland yaseSwitzerland)
ISwitzerland ihlale yomelele kuzo zonke iingxaki zemali kule minyaka idlulileyo, kwaye iSwitzerland Franc (aka CHF) isenamandla amakhulu njengemali. Ukuba amajelo eendaba ezemali abika ukuba iimali ezinamandla ezivunayo zibuthathaka kune-CHF-oku kunokuba sisibonakaliso esomeleleyo sokuba kubekho uhlobo oluthile lwesiphithiphithi semarike eYurophu. Kule meko, isenzo sibonisa imeko 'yomngcipheko'.
Abatyalomali abavela kumazwe amaninzi ahlukeneyo baziwa ngokubalekela kwiingalo ezikhuselekileyo zaseSwitzerland ngexesha lengxaki yemali- ke i-CHF yaziwa njengendawo 'ekhuselekileyo' Oku ikakhulu kungenxa yokuba inoqoqosho olukhuselekileyo, umgaqo-nkqubo wezemali oqinisekileyo, kwaye Yintoni ethathwa ngokubanzi njengelizwe elizinzileyo kwezopolitiko.
I-JPY (iJapan Yen)
Ukuba amajelo eendaba ezezimali abika ukuba iimali ezinamandla ezivelisayo zibuthathaka kuneYen yaseJapan, iindaba / idatha iya kuza njengokudana kwiimarike. Ngokukodwa ukuba iindaba zinxulumene nedola yaseMelika, iimarike kunokwenzeka ukuba zijonge kwiJPY 'njengendawo ekhuselekileyo'.
Ezinye zezibini zemali ezaziwa kakhulu ukuhlawula inzala ekhethekileyo kwezi:
Xa kuziwa 'kumngcipheko-weqhinga' lokurhweba, ezi zibini zidweliswe apha ngasentla ziyaziwa kakhulu- kwaye inokuba ngumqondiso 'wokuthintela umngcipheko' ukuba kukho ukwehla okukhawulezayo.
Ngomlinganiselo omkhulu wokungaqiniseki ihlabathi elijongene nalo ngeli xesha; ukuba umzekelo i-AUD / JPY kunye ne-USD / JPY iyenyuka, imakethi inokubalekela ukhuseleko, mhlawumbi ukuya kwi-EUR, JPY okanye kwi-CHF, kuba oku luphawu lokuba kubekho utshintsho kwimowudi 'yomngcipheko'.
Ngaba ndingathenga i-100% yeeasethi ezingenabungozi?
Ngelishwa hayi, awungekhe. Njenge-monch monster kunye ne-bigfoot, i-100% yee-asethi ezingenamngcipheko azikho nje. Amathuba okuba ungabinamngcipheko ngokupheleleyo ayinakwenzeka, kuba akukho ziqinisekiso zokuba nayiphi na i-asethi iya kukhuseleka ngokusisigxina.
Kwimeko yemali yokwenyani (aka cold hard fiat cash), kusekho umngcipheko wokunyuka kwamaxabiso okwehla kancinci kwamandla akho okuthenga. Iimbali zembali zokuba oku kuye kwenzeka amaxesha amaninzi. 'Umngcipheko' kunye 'nomngcipheko' yimizekelo yesimo sentengiso, ke umngcipheko uhlala ubakhona nokuba uthini.
Yintoni uHlaziyo loBugcisa?
Sebenzisa itshathi yamaxabiso ukuqikelela inkxaso, ukomelela kunye nokuqhubekeka kwamanyathelo exabiso - uhlalutyo lobuchwephesha lufunda ngezenzo zexabiso zexesha elidlulileyo, ukuze uzame ukuqikelela into enokwenzeka kwixesha elizayo. Ngokuhlalutya iitshathi zamanani ukuqikelela ukukhula kunye nokumelana, uhlalutyo lobuchwephesha linceda abathengisi ekuqikeleleni ukuba loluphi urhwebo olunokubakho okuphezulu. Ke ngoko, oku kwenza ukuba kube lula ukuphuma kwaye ungene kolo rhwebo ngokusekwe kwinto enokwenzeka.
Nangona uhlalutyo lobuchwephesha lungazami ukulinganisa ixabiso elisisiseko, lenza iipateni ngendlela yeetshathi zamaxabiso kunye nezalathi zobuchwephesha, kwaye ke oku kwenza isiseko esihle sokungena nokuphuma kurhwebo. Imikhwa evelayo kunye nokuhamba kwamaxabiso kuya kulandela ipateni emiselweyo, kwaye oku ngokuyinxenye kubulela kwizengqondo zentengiso. Ngokubanzi, amalungu eemarike athambekele ekusebenzeni ngendlela efanayo xa ejongene nemeko ehambelana nayo.
Uhlalutyo lobuchwephesha kunye nohlalutyo olusisiseko zizinto ezimbini ezahlukeneyo ngokupheleleyo. Uhlalutyo olusisiseko alunakho ukusebenzisa idatha yexabiso kunye nevolumu, ngelixa uhlalutyo lobuchwephesha lunakho, kwaye lwenza njalo. Ngokuhlalutya imbali yangaphambili yamanyathelo entengo, uhlalutyo lobuchwephesha lunokujonga phambili kwikamva, kunye nethuba elingcono kakhulu lokuqikelela ngokuchanekileyo imikhwa yorhwebo kunye nokuhamba kwexabiso leasethi ukuza kamva ezantsi emgceni.
Kuhlala kukholelwa ukuba iipateni zamaxabiso exesha elidlulileyo ekugqibeleni ziyaziphinda kamva. Xa uthatha isigqibo sokuba ungenise ulwazi lokuhamba, kuthathelwa ingqalelo kuluncedo kakhulu phakathi kwabarhwebi be forex. Eyona njongo iphambili yohlalutyo lobuchwephesha kukufunda ulwazi esele lukhona malunga nexabiso leasethi, endaweni yokugxila kuhlalutyo lwamaxabiso eentshukumo.
Umgangatho wexabiso uya kuhlala unyanzeliswa luhlalutyo lonikezelo kunye nebango kwintengiso.
Nantsi ingcinga ephambili yohlalutyo lobuchwephesha:
Unokuqonda okungcono malunga nokuba ngabathathi-nxaxheba kwimakethi banokwenza ntoni ngokulandelayo.
Abarhwebi bayakwazi ukujonga ukuba ngaba ukuthenga okanye ukungathengi inzala kuyanda / kuyancipha.
Enkosi kutshintsho lwamaxabiso osandula ukulujonga, unokufumana ukuqonda okungcono kakhulu malunga nokuba indawo yomthengi kunye nabathengisi inokuba yeyiphi.
Ezi zizinto ezintathu ezisisiseko zohlalutyo lobuchwephesha olusekwe:
Ngenxa yabathengi kunye nabathengisi kwimarike, amaxabiso enzala, kunye neengxelo zengqesho ziya kubandakanywa ngaphakathi kwexabiso njengombandela. Imakethi iyayiphawula yonke into phantsi, kwaneemeko zoqoqosho olukhulu (aka basic) zibandakanyiwe kwixabiso lemali.
Kukholelwa ngokubanzi ukuba amaxabiso exesha elidlulileyo aya kuthi ekugqibeleni abuye ajikeleze, ke kuluncedo ukujonga kwixesha elidlulileyo kunye neendlela ezikhoyo.
Ukuhamba kunye nokuhamba kwexabiso kufumaneka kalula.
Kutheni uhlalutyo lobuGcisa luluncedo?
Eyona iinjongo Uhlalutyo lobugcisa zezi:
Ukubeka iliso kumanani kunye neenjongo zokwenza inzuzo engaguquguqukiyo kurhwebo, kunye nokubeka iliso kuzo naziphi na iipateni ezivela kwintengiso.
Shiya ukucamngca ngokweemvakalelo, kwaye ukwazi ukwenza izigqibo zobulumko nezifundisiweyo zorhwebo.
Uhlalutyo lobuchwephesha lukunceda ukuba uqonde xa ungena kwaye uphuma kwintengiso ngumbono olungileyo. Konke malunga nexesha, kwaye xa intengiso iqala ukutshintsha, uhlalutyo lobuchwephesha luya kuyazi.
Uhlalutyo lobuchwephesha lusebenzisa iitshathi zamaxabiso kunye / okanye namaxesha amisiweyo ukuze ikwazi ukubona imeko, ixhaswe kukuzinza kwintengiso. Xa kuziwa kwicala lezentengiso ngokwalo, kukho iindlela ezintathu kuphela okwangoku, kwaye zezi zilandelayo:
Ngokwenyani, amaxabiso aya kuhamba ngokubanzi kwipateni ye-zig-zag, ke inyathelo lamaxabiso liya kuba nezikhundla ezibini kuphela.
uluhlu: Amaxabiso aya kudala ubume be-zig-zag, ecaleni kwelinye.
Umkhangeli: Amaxabiso aya kuthi zig-zag aphakame kakhulu kwi 'uptrend' kwaye asezantsi kwi 'downtrend'
Izixhobo eziphambili ezi-3 ezisetyenziswa luhlalutyo lobuchwephesha zezi:
Iipateni zetshathi: Ngokuchonga iipateni ezinkulu zetshathi, bayakwazi ukuqikelela ukuba amaxabiso angakhokelela phi.
Ixabiso lesenzo: Ukuphunyezwa ngokuhlalutya ukunyakaza kwamaxabiso kwimbali, isenzo sexabiso kubandakanya ukwenza iitshathi ukuqikelela ukuba yeyiphi na indlela yentengiso, kwaye kunjalo- kweliphi icala.
Izalathisi zobugcisa: Ngokusebenzisa izixhobo zamanani kunye nobuchule onokufikelela ekuthengiseni nasekuthengeni imiqondiso.
Lilonke, uhlalutyo lobuchwephesha sisixhobo esibalulekileyo, esenza ukuba ukhethe ubugcisa kwezona zinto zibalaseleyo kwaye ubone nabuphi na ubukho obunokwenzeka. Ngaphandle kokusebenzisa ulawulo lwengozi olushiyekileyo olunenzuzo phantse alufumaneki.
Umgaqo osisiseko wohlalutyo lobuchwephesha kukusetyenziswa kweepateni zetshathi. Ukuhamba kwamaxabiso kuya kuboniswa kusetyenziswa iindlela ezahlukeneyo kunye / okanye amagophe (iphatheni yetshathi), kwaye ezi patheni zibalulekile kwimpumelelo yohlalutyo lobuchwephesha.
Abarhwebi abanamaxesha banokubona umahluko kwixabiso leeasethi zemali. Iipateni ezisetyenziswa ngokubanzi zezi:
Ukwenziwa kwentloko kunye namagxa
Ukuzichonga kunye nokuziqhelanisa nezi patheni kunokwenyusa amathuba akho okuqikelela ukuba leliphi icala elingena kulo. Amaxesha epatheni yetshathi anokuhluka kakhulu kwaye anokusekwa kwimizuzwana, imizuzu, iiyure, okanye iinyanga. Le patheni ixhomekeke kwinani labantu abasemarikeni abanikela ingqalelo kubo.
Ipateni yetshathi eqhubeka ngokuxhaphakileyo ihlala isebenzisa oonxantathu, iiflegi kunye neepennants - Iphethini inceda abathengisi ekuqhubekeni nomkhwa. Ukutshintsha iipateni zetshathi zama ukufumana amathuba okurhweba ngokutshintsha kwexabiso elithile.
Kananjalo nokubonisa ulwazi olubalulekileyo olufana nokuthengisa kunye nexabiso elifanelekileyo, ikwavavanya udidi ngalunye lweasethi. Olunye udidi lweeasethi oluvavanywa kwipateni yetshathi zezemali, izitokhwe kunye nee-cryptocurrensets ukubala ezimbalwa.
Ke ngoku ekubeni sigubungele iziseko, kwicandelo elilandelayo lexabiso lethu lokurhweba nge-PDF siya ngokubaluleka kwengqondo xa sithengisa.
I-Psychology yasemva kweTshathi yeepateni
Iipateni zetshathi zixhomekeke kakhulu kwizengqondo zentengiso. Ukubonelela kunye nokufunwa kukwadlala indima enkulu xa kuziwa kwindlela yokwenziwa kweepateni zetshathi. Uxinzelelo xa kufikwa ekuthengeni nasekuthengiseni uncedo ekwenzeni iipateni zetshathi, ke ithiyori, ayinamsebenzi ukuba leliphi ixesha elibekiweyo oza kuthi urhwebe ngalo kuba abantu bebeka nayiphi na iodolo phambili.
Uluhlu olungezantsi lubonelela ngenkcazo elula yamaxesha afumanekayo xa kuthengiswa ngeepateni zetshathi:
Ixesha elibekiweyo lenyanga okanye ngeveki lilungile kurhwebo lokuma.
Iitshathi zeeyure ezingama-4 kunye neetshathi zemihla ngemihla zilungile Ukuguqula ukurhweba
Iitshathi zemizuzu emi-5 ukuya kweli-15 (ezaziwa njengeetshathi zangaphakathi) ziluncedo kuzo ukuthengisa ngosuku.
Jonga umkhwa ophakamileyo ngexesha lakho elikhethiweyo
Nje ukuba uchonge eyona nto iphambili kuyo, kuya kufuneka ukuba ube nexesha lokuthengisa ngokufunda ipateni yetshathi.
Ngaphandle kokuba unesakhelo esimiselweyo, ayingombono mhle ukurhweba ngokusekwe kwiipateni zamaxabiso eziqwalaselweyo, njengoko oku kulingana nokuthengisa ngokusekwe kwiimvakalelo zakho, ezinokuba bubuthathaka kurhwebo.
Ukurhweba ngamaxabiso ngeNtengo-Abona Barhwebi baGqwesileyo kunye neQonga
Ukuphantse ukuyenza ukuba ifikelele esiphelweni ixabiso lethu lokurhweba nge-PDF, kuya kufuneka ngoku ube nokuqonda okuhle malunga nokuba yeyiphi intengiso yesenzo sexabiso. Intengiso yesenzo sexabiso sisicwangciso esisetyenziswa ngabarhwebi abanamava njengexesha elide, kunye nexesha elifutshane, indlela yorhwebo.
Ngoku siza kukunika ulwazi oluncinci kubarhwebi aba-5 abaziwayo abalungele ixesha lakho. Ngamnye ukhethwe ngononophelo liqela lethu ngenxa yemirhumo ephantsi kunye neeklasi ezininzi zeempahla onokukhetha kuzo. Eyona nto ibaluleke kakhulu, umrhwebi ngamnye ulawulwa kakhulu, ke imali yakho ikhuselekile ngalo lonke ixesha.
1. AVATrade - 20% Ibhonasi eyamkelekileyo
Ngokukhawuleza xa uziva ukulungele ukuvula iakhawunti eyinyani kwaye uqale ukurhweba ngaphakathi kwintengiso yobomi, kufanelekile ukuba ukhankanye ukuba i-AVATrade ibonelela ngokusasazeka okuphantsi kakhulu, kwaye ayilindelanga ikhomishini yorhwebo.
Iphakheji yokwamkela kweli qonga inomdla nge-20% ebonelelwe nge- $ 10,000.
Intengiso yesenzo sexabiso ibonisa ukubuyela kwindlela esisiseko kurhwebo. Ngamagama alula, ayikhe ibe licebo elilungileyo ukugxila kuphela kwiipateni zamaxabiso exesha elidlulileyo, okanye kugxilwe kuphela okwangoku.
Ndiyathemba ukuba, ekupheleni kwexabiso lethu lokurhweba nge-PDF, uya kuba nokuqonda okungcono ngakumbi malunga nokuba yintoni intengo yokurhweba, kwaye kutheni ukuqonda ngokuqinileyo ukubaluleka kwayo kuya kuba luncedo kuwe xa kufikwa kwimpumelelo ikamva kurhwebo.
Zeziphi iiasethi ezisebenza ngexabiso lentengiso?
Intshukumo yorhwebo ngamaxabiso ichaphazeleka ziindlela, hayi izixhobo zomntu ngamnye. Kananjalo, nokuba ufuna ukurhweba ngamasheya, ii-indices, ii-cryptocurrensets, i-forex, okanye izinto ezithengiswayo-intengo yokurhweba ngamaxabiso sisixhobo esiluncedo kakhulu onaso.
Ndingavavanya njani iqhinga lam lokurhweba ngexabiso?
Sicebisa ukuba kuvulwe iakhawunti yomrhwebi size sisebenzise indawo yaso yedemo. Ngokwenza njalo, uya kuziqhelanisa nokuthengisa ngexabiso lentengo ngaphandle kokubeka emngciphekweni imali yakho.
Ngaba ukurhweba ngamanani amaxabiso kufanelekile kwixesha elifutshane okanye elide?
Ngaba ukuthengiswa kwamanyathelo entengo kuyafana nohlalutyo lobuchwephesha?
Hayi, ukuthengiswa kwentshukumo yexabiso akufani nohlalutyo lobuchwephesha. Kodwa, uhlalutyo lobuchwephesha lenza icandelo elibalulekileyo xa urhweba nge-Intanethi, ke kuya kufuneka uchithe ixesha elithile ufunda ukuba lisebenza njani.
Yintoni umngcipheko kwimalike yamanyathelo entengo?
Njengoko igama libonisa, umngcipheko wokuzama ukuqinisekisa ukuba imarike ivakalelwa njani. Oko kukuthi, inkqubo ijonge ukubona ukuba iimarike ezibanzi ziziva zizithembile (ngokuthenga ii-asethi eziyingozi) okanye uloyiko (ngokuthenga iiasethi ezikhuselekileyo).
Zeziphi iindawo ezikhuselekileyo zokurhweba ngamaxabiso ngexabiso?
Ngokwembali, iindawo ezikhuselekileyo ziya kubandakanya idola yaseMelika, ubunondyebo baseMelika, ukhuseleko lukarhulumente, igolide kunye neSwitzerland franc.
Lo ngumbuzo ophantsi, kuba kuya kuhlala kukho abantu ababini abajonga ukurhweba ngamanyathelo ngamaxabiso ngokwahlukileyo. Oko kukuthi, bobabini abathengisi banokutolika iimvakalelo zentengiso ngendlela eyahlukileyo!